Ihe nzacha AquaClear kacha mma maka akwarium, nke ị ga -ahọrọ? | Nke azụ
Natalia Cerezo | 01/09/2021 11:39 | Ngwa
Ihe nzacha AquaClear ga -ada ka onye ọ bụla nọrọla na ụwa akwarium, ebe ọ bụ na ha bụ otu n'ime ama ama na ahụmịhe kachasị na nzacha akwarium. A na -eji ihe nzacha akpa azụ ha, nke a makwaara dị ka nsụda mmiri, ka obodo niile wee jiri ya kpọrọ ihe ma jiri ya mee ihe.
Ke ibuotikọ emi anyị ga -ekwu maka ihe nzacha AquaClear na omimi, anyị ga -akwado ụfọdụ ụdị ha, anyị ga -ahụ nkọwapụta ha, anyị ga -akụzịkwara gị ka esi ehicha ha. Anyị na -akwadokwa ka ị gụọ akụkọ metụtara ya osmosis filter maka akwarium, ihe niile ịchọrọ ịma.
1 Ihe nzacha AquaClear kacha mma
2 Otu ihe nzacha AquaClear si arụ ọrụ
3 Ụdị akụkụ nchigharị nzacha AquaClear
3.2 Chemical nzacha
3.3 Nzacha nke ndu
4 AquaClear ọ bụ ezigbo akara nzacha maka akwarium?
5 Ihe nzacha AquaClear ọ na -eme mkpọtụ?
6 Otu esi ehicha ihe nzacha AquaClear
7 Ugboro ole ka ị ga -agbanwe ibu nza?
Ihe nzacha AquaClear kacha mma
Usoro AquaClear nke ...
AquaClear A610 - sistemụ…
Ụgwọ nzacha AquaClear ...
Ọzọ anyị ga-ahụ ihe nzacha kacha mma nke ika a. Agbanyeghị na ha niile na -ekerịta otu nkọwa na, n'ezie, ịdị mma, enwere ike ịhụ ihe dị iche na lita kachasị nke aquarium nwere ike ịnwe ebe anyị ga -etinye ihe nzacha na ọnụ ọgụgụ lita a na -edozi kwa elekere:
Ihe nzacha a nwere njiri mara AquaClear niile, yana sistemụ na -agbachi nkịtị, na ụdị ụzọ nzacha atọ ya, maka akwarium ndị anaghị agafe lita 76. Ọ nwere ọnụego na -asọba nke na -ahazi ihe karịrị lita 300 kwa elekere. Ọ dị mfe ịgbakọta na anaghị ewe ohere ọ bụla.
Na nke a ọ bụ ihe ihe nzacha na -enye ohere itinye ya na akwarium ruo lita 114, na nke ahụ nwere ike ịhazi ihe karịrị lita 500 kwa elekere. Dị ka ihe nzacha AquaClear niile, ọ na -agbachi nkịtị ma tinye nzacha atọ dị iche iche (igwe, kemịkalụ na ndu). Site na AquaClear mmiri dị na akwarium gị ga -adị ọcha.
Nlereanya a nke nzacha AquaClear bụ yiri ndị ọzọ, mana akwadoro maka iji ya na akwarium ruo lita 190. Ọ nwere ike ịhazi ihe dị ka lita 700 kwa elekere. Dị ka ụdị ndị ọzọ, AquaClear 50 gụnyere njikwa usoro nke ị nwere ike iji belata mmiri.
Anyị na-akwụsị na ihe nlereanya kachasị ukwuu nke nzacha nke ika a, nke enweghị ike iji ya ma ọ bụ ihe na -erughị na akwarium ruo lita 265.. Ihe nzacha a nwekwara ike hazie ihe karịrị otu puku lita kwa elekere. Ọ buru oke ibu karịa ndị ọzọ, nke na -ahụ maka ike dị egwu (nke na ụfọdụ kwuru na ha mere ya ka ọ kacha nta).
Otu ihe nzacha AquaClear si arụ ọrụ
Ihe nzacha AquaClear bụ ihe nke a maara dị ka nzacha akpa azụ. Ụdị nzacha ndị a dabara adaba maka obere akwarium. Ha "na -arapara" na mpụga tank ahụ, n'otu akụkụ nke elu (ya mere aha ha), yabụ na ha anaghị eburu ohere n'ime akwarium na, ọzọkwa, ha adịghị oke oke dị ka ihe nzacha mpụga ahaziri maka nnukwu akwarium. Na mgbakwunye, ha na -atụba mmiri n'ụdị nsụda mmiri, nke na -eme ka ikuku oxygen ya ka mma.
Ihe nzacha AquaClear na -arụ ọrụ dị ka ọtụtụ nzacha nke ụdị:
Nke mbu mmiri na -abanye site na ọkpọ rọba wee bata na nyo.
Mgbe ahụ ngwaọrụ na -eme nzacha site na ala ruo n'elu na mmiri na -agafe ihe nzacha atọ dị iche iche (igwe, kemịkal na ndu, nke anyị ga -ekwu maka ya ma emechaa).
Ozugbo emechara nzacha ahụ, mmiri ahụ na -adaba na akwarium, oge a dị ọcha na enweghị mmerụ.
Ihe na -atọ ụtọ gbasara nzacha nke ika a mara mma bụ na ha gụnyere, na mgbakwunye na ihe nzacha atọ dị iche iche, a njikwa njikwa nke ị nwere ike belata oke mmiri site na ruo 66% (dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na -azụ azụ gị). Igwe ihe nzacha anaghị akwụsị ịrụ ọrụ n'oge ọ bụla, yana, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na mbelata ya na -ebelata, ịdị mma nke mmiri nzacha anaghị adalata.
Ụdị akụkụ nchigharị nzacha AquaClear
Dị ka anyị kwuru na mbụ, Ihe nzacha AquaClear nwere sistemụ nzacha atọ iji wepu adịghị ọcha niile nke mmiri wee hapụ ya ka ọ dị ọcha dịka o kwere mee.
AquaClear Carbon Carbon ...
Ọ bụ nzacha nke mbụ na -abanye mgbe nzacha na -arụ ọrụ, si otú a na -amachi ihe ndị na -adịghị ọcha kasịnụ (dịka ọmụmaatụ, ihe fọdụrụ na nsị, nri, ájá kwụsịtụrụ ...). Ekele maka nzacha igwe, mmiri abụghị naanị na -adị ọcha, kamakwa ọ na -erute nzacha nke ndu n'ụzọ kachasị mma, nzacha kachasị mgbagwoju anya na nke atọ. N'ihe banyere AquaClear, a na -eji ụfụfụ eme ihe nzacha a, ụzọ kachasị mma iji weghara ihe ndị a.
Naanị n'elu ụfụfụ nke na -ebu nzacha n'igwe anyị na -ahụ nchịkọta mmiri, nke nwere carbon na -arụ ọrụ. Ihe usoro nzacha a na -eme bụ iwepu obere irighiri etisasịworo n'ime mmiri nke nzacha igwe na -enweghị ike ịnya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bara ezigbo uru mgbe ịchọrọ ihicha mmiri mgbe ị gbasịrị azụ azụ gị, n'ihi na ọ ga -ewepụ ọgwụ ọ bụla fọdụrụ. Ọ na -enyekwa aka ịkwụsị ísì. A naghị atụ aro ihe nzacha a maka ojiji na akwarium mmiri dị ọhụrụ.
Nzacha nke ndu
Nchaji AquaClear ...
N'ikpeazụ, anyị na -abịa nzacha kachasị dị nro, nke dị ndụ. Ọ bụ nje na -ebi na Biomax, akpa seramiiki nke AquaClear na -eji na nzacha a, na -ahụ maka nzacha a. Ihe nje bacteria dị na canutillos bụ ọrụ maka ịgbanwere ụmụ irighiri ihe na -abịakwute ha (dịka ọmụmaatụ, site na ahịhịa na -emebi emebi) ka ọ bụrụ ihe na -egbu egbu nke ukwuu iji mee ka akwarium gị dị mma na azụ gị nwere obi ụtọ. Na mgbakwunye, nzacha ihe ọmụmụ nke AquaClear na -enye gị nwere uru na enwere ike iji ya na akwarium mmiri ọhụrụ na nnu.
AquaClear ọ bụ ezigbo akara nzacha maka akwarium?
AquaClear enweghị mgbagha a ezigbo akara maka ma ndị mbido na ndị ọkachamara n'ụwa akwarium. Ọ bụghị naanị n'ihi na ha bụ akara nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme yana na ọ dịkwa n'ọtụtụ ebe (ma ọ bụ n'ịntanetị ma ọ bụ n'ụlọ ahịa anụ ụlọ, dịka ọmụmaatụ) mana n'ihi na echiche na -agbasa na ịntanetị ha niile nwere ọtụtụ isi na nkịtị: na ha bụ Ọ bụ akara ama ama, yana ọtụtụ ahụmịhe na -ewu ihe nzacha, nke kachasị mma ma tinye nnukwu nlekọta na ngwaahịa ya.
Ihe nzacha AquaClear ọ na -eme mkpọtụ?
Ihe nzacha AquaClear bụ ama maka ịnọ jụụ. Agbanyeghị, ọ na -abụkarị na ha na -akụ ụda n'ụbọchị ndị mbụ ejiri ya, ebe ọ bụ na ha ka ga -enwerịrị ihe nkiri.
Aghụghọ nke mere na ọ naghị ada ụda nke ukwuu bụ ịnwale na ihe nzacha ahụ adịghị ịdabere na iko akwarium, ebe ọ bụ na ọtụtụ oge ọ bụ kọntaktị a na -ebute ịma jijiji na mkpọtụ, nke nwere ike iwe ntakịrị. Iji mee nke a, kewapụ ihe nzacha ahụ na iko, dịka ọmụmaatụ, site na itinye mgbanaka rọba. Ọnọdụ nzacha dịkwa mkpa ka ọ ghara ime oke mkpọtụ, ọ ga -akwụrịrị ọtọ.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ọ na -aga n'ihu na -eme nnukwu mkpọtụ, a na -atụ aro ka ị lelee ma ọ nwere ụfọdụ ihe siri ike (dị ka grit ma ọ bụ ụfọdụ irighiri ihe) fọdụrụ n'etiti tobaim na ogwe moto.
Otu esi ehicha ihe nzacha AquaClear
Ihe nzacha AquaClear, dị ka ihe nzacha niile, kwesịrị ịdị ọcha site n'oge ruo n'oge. Agbanyeghị ugboro ole ị ga -eme ya dabere na akwarium ọ bụla na ike ya, ị ga -amarakarị na ọ bụ oge maka nhicha mgbe ọpụpụ ọpụpụ ga -amalite ibelata (na -abụkarị kwa izu abụọ) n'ihi irighiri ihe na -agbakọta.
Nke mbu, igha aghaghi ime ya kwụpụ ihe nzacha ahụ ka ị ghara inwe ọkụ na -atụghị anya ya ma ọ bụ nke ka njọ.
Emechaa ebukọtala ihe nzacha ahụ (moto carbon, akpa seramiiki na ogbo nzacha). N'ezie, AquaClear agụnyela nkata dị mma nke nhicha ihe niile ekwesịghị iji ihe karịrị nkeji ise.
Tinye ụfọdụ mmiri akwarium n'ime nnukwu efere.
Ọ dị mkpa ka ị na -eji mmiri akwarium hichaa ogbo na ihe ndi ozo nyo. Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ n'ịmaatụ, ị na -eji mmiri mgbata mmiri, ihe ndị a nwere ike merụọ ma nzacha ahụ akwụsị ịrụ ọrụ.
Ọ dịkwa mkpa ka ị mee ya ọzọ debe ihe niile ebe ọ dị mmaMa ọ bụghị ya, mkpuchi agaghị emechi nke ọma, yabụ nzacha ga -akwụsị ịrụ ọrụ nke ọma.
N'ikpeazụ, etinyekwala ihe nzacha ma mee ya nkụMa ọ bụghị ya, enwere ihe egwu na ọ ga -ekpo oke ọkụ wee gbaa ọkụ.
Ugboro ole ka ị ga -agbanwe ibu nza?
Nọmalị A ghaghị ịgbanwe ibu nzacha site n'oge ruo n'oge nke mere na ihe nzacha ahụ na -aga n'ihu na -arụ ọrụ ya nke ọma, ma ọ bụghị ya, mpekere nke mkpokọta nwere ike imetụta ogo filtrate na mmiri. Agbanyeghị, dị ka oge niile, ọ dabere na ike nke akwarium, ihe kachasị bụ:
Gbanwee ogbo kwa afọ abụọ ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ mgbe ọ na -arapara wee daa.
Gbanwee arụ ọrụ carbon nzacha otu ugboro n'ọnwa ma ọ bụ karịa.
na ihe mkpuchi seramiiki n'ozuzu ha ekwesịghị ịgbanwe ha. Ka nje bacteria na -eme nke ọma, ka ha ga -arụ ọrụ nzacha ha nke ọma!
Ihe nzacha AquaClear bụ ezigbo azịza maka nzacha akwarium gị ma maka ndị ọhụrụ na ụwa a yana maka ndị ọkachamara, yana maka ndị nwere akwarium nwere oke nha ma ọ bụ ndị nwere ike ịsọ mpi n'oké osimiri n'onwe ya. Gwa anyị, kedụ ihe nzacha ị na -eji na akwarium gị? Ị nwere ike ịkwado ihe ọ bụla? Kedu ahụmịhe ị nwere na ika a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Ngwa » Ihe nzacha AquaClear